MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA BULLYPIT IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Bullypit iyo Sawiro
Bulldog Ameerika / Ereyga Godka Dibida eey eey Isku Darka Yihiin
Ellie American Bulldog / Pit Bull mix at 3 sano jir— 'Ellie, oo galab wanaagsan ku raaxeysaneysa milkiilayaasheeda afarta Eeyo Tavern. Macaan wadarta, gardaro la'aan, cabsi maleh. '
chihuahua iyo min pin mix
Fiiro gaar ah: The purebred Dagaalyahan Mareykan ah sidoo kale mararka qaarkood waxaa loo yaqaan Bullypit
Bullypit-ka maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Bulldog Mareykan ah iyo Godka Dibida Maraykanka . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Ellie American Bulldog / Pit Bull wuxuu isku daraa 3 sano jir
Caine American Bulldog / Pit Bull mix (Bullypit) at 1 sano jir - Waan ku soo koray Dibi Dibi oo had iyo jeer jeclaa Bulldogs Mareykan ah . Waxaan helay Caine markii uu jiray kaliya 3 toddobaad. Wuxuu ahaa mid aad u yar. Gacmaha hoos, noocani isku dhafan waa inuu noqdaa mid ka mid ah, haddii uusan aheyn kii ugu fiicnaa abid. Isagu waa ilaaliyaa aniga iyo kuwa aan jeclahay. Shakhsiyaddiisa lama soo koobi karo. Shaki kuma jiro taas, waa saaxiibka ugu fiican ee qof walba yeelan karo. Wuxuu jecel yahay inuu legdamo, orodkiisu waa cajiib. Markaan u gudubno harada wuxuu isku dayaa sida ugu adag inuu qabto shinbiraha . '
'Kani waa Vejita isugeynta Bullypit-ka 14 bilood gudahood welina wuu sii korayaa. Wuxuu culeyskiisu yahay ilaa 80 rodol, waa mid aad u dhaqan wanaagsan, gaar ahaanna wuxuu ahaa mid fudud in la tababaro.
'Kani waa isku-darka badbaadinta Mareykanka ee Bulldog / Pit Bull Terrier, Deuce markay tahay 6 ½ bilood jir, miisaankeedu yahay 55 lbs. iyo 23 ”garabka. Hooyadiis waa Am. Bulldog iyo aabihiis waa God. Qashinkiisa, oo ay ku jiraan waalidkiis, waxaa badbaadiyay ururkeenna badbaadinta. Dhammaantood waxay heleen qoysas waaweyn oo masuul ah. '
'Deuce waa mid aad u qosol badan, aadna u caqli badan, in kasta oo goofball weyn yahay! Tababarku aad ayuu muhiim noogu yahay waana inuu u ahaadaa milkiile kasta oo mas'uul ka ah nooc cagajuglayn ah oo caadi ahaan cabsi geliya dadka aan fahmin. Waxaan korinaa eeyaha si aan uga caawino isaga inuu si wanaagsan u dhexgalo oo aan u keeno fasalo tababar iyo xannaano maalmeed wiiggii hal mar si xoogaa madadaalo ah! Wuu eryan doonaa bisadaha ka dibna wuu soo jeesan doonaa si ay u cayrsadaan !!
Wuxuu jecelyahay inuu ciyaaro wuuna jecel yahay isquncinta. Wuxuu u maleynayaa inuu yahay eey dhab ah. Isagu waa mid layaableh caruurteena iyo qofkasta oo kale arintaas. Isagu waa MAYA eey waardiye ah, ciduu u ogolaanayaa! Sshhhh !! '
'Waxaad u baahan tahay inaad ku sabirto tababarka eyga nuucaan ah, waa kuwo caqli badan oo diyaar u ah inay ka farxiyaan, laakiin sidoo kale waa kuwo saaxiibtinimo badan, marka waxaa laga yaabaa inay go'aansadaan inay ku salaamaan markii aad doorbideyso inay fadhiistaan ​​!! LOL. Waxay u baahan yihiin a nooca hogaamiyaha milkiilaha, maahan qof u ogolaanaya inay la baxaan wax walba. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay bilaabaan tababarka eeyahooda si ay u tusi doonaan dhammaan 'kuwa aan rumaysadka lahayn' sida weyn eeyadan runtii u yihiin !!! '
Deuce the American Bulldog / Pit Bull Terrier mix as a 9-toddobaad-eey yar
Vejita eyga isku dhafan ee Bullypit (American Bulldog / Pit Bull breed breed)
'Kani waa Isyss my Bullypit puppy at 6 toddobaad. Iyadu waa Bulldog Mareykan ah (aabaheed) iyo Pitbull Terrier (hooyadeed) oo isku jira. Waxay jeceshahay inay sahamiso wax walbana way qaniineysaa qof walbana oo ay ku jiraan eyga kale, Maye (waa Pitbull Terrier 2 jir ah). Waxay durba heshaa suuliga banaanka aada wax shil ahna ma dhicin 2 maalmood gudahood.
Isyss the Bullypit eey 6 asbuuc jir ah sanduuqiisa.
'Kuwani waa sawirada Bullypit-kayga (American Bulldog / American Pit Bull Terrier mix) eey. Magaciisu waa Sirus. Wuxuu ku jiraa 6 toddobaad sawirradan. Isagu waa eey weyn, aadna u firfircoon. Annagu waxaannu ku tababbaraynaa musqusha xilligan oo shilal aan badnayn ayaa na soo maray. Aabihiis waa Hines nooca American Bulldog hooyadiisna waa American Pitbull Terrier oo ka baxsan khadadka Sarona, Alligator iyo Chinaman.
Sirus, Bullypit (American Bulldog / American Pit Bull Terrier mix) eey yar oo ah 6 toddobaad jir
isku dar bulldog iyo godob
Sidee baan ku ogaan haddii waxaan ahay Alfa eey ku
iskudhafka adhijir german ee Jarmalka
sawirrada eeyaha cagajuglaynta Mareykanka